Youssoufa Moukoko Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Leon Bailey Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Marcelo Bielsa Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
musha AMERICAN BHUKU DZEMAHARA Vanotamba Nhabvu Vanotamba Papu Gomez Childhood Nyaya Plus Untold Biography Facts
Yedu Papu Gomez Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yehucheche Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mota, Net Kukosha, Mararamiro uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, iyi Nhoroondo yeHupenyu yeArgentina nyanzvi yenhabvu. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - pfupiso yakakwana yePapu Gomez's Bio.
Hupenyu nekusimuka kwaPapu Gomez.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye mutungamiri mukuru padandemutande ane tarenda uye ane simba. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga yedu vhezheni yePapu Gomez's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitange.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Kune vanotanga Biography, ane zita remadunhurirwa rekuti "El Pachu“. Vabereki vaPapu Gomez vaive naye pa 15th zuva raFebruary 1988 uye akamupa mazita Alejandro Dario Gómez. Zita "Papu Gomez”Rinongova zita remadunhurirwa. Mutambi wenhabvu akazvarwa muguta reBuenos Aires, Argentina kuvabereki vasingazivikanwe nezvazvo panguva yekunyora iyi bio. Pazasi payo pikicha yevabereki vaPapu Gomez- baba vake vakafanana uye amai vakanaka.
Sangana naPapu Gomez Vabereki.
Gomez ndeweItaly-Argentine nyika yedzinza rakasanganiswa neSouth America yemhuri mavambo. Akakurira kuAvellaneda muguta rake rekuzvarwa - Buenos Aries - kwaakakurira pamwe chete nasisi vake Monica. Kukura mumhuri yepakati-yemhuri kumashure kuAvellaneda muBuenos Aries, wechidiki Gomez akararama nekufema nhabvu mukati memakore ake ekuumba. Imba yemhuri yevechidiki Gomez yanga isiri kure nenhandare dzemakirabhu emuno Independiente uye Mujaho. Muchokwadi, yaive padhuze zvakakwana kuti iye aende akasununguka ikoko nebhasikoro.
Kukura kuAvellaneda muBuenos Aries: Mufananidzo wehucheche waPapu Gomez.
Chii chimwe? Sekuru vaGomez vaive chikamu chechikwata cheIndependiente icho chakakunda iyo Intercontinental mu1984 apo baba vake vaishanda nekirabhu. Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti nhabvu yaive mumhepo yevechidiki Gomez.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kusiyana nevazhinji veArgentina, kunyanya vana vezera rake, Gómez haana kukura achiimba rumbidzo dze Diego Maradona. Zvidhori zvake zvaive zviri zveArgentina Ngano - Pablo Aimar, Juan Román Riquelme naSebastián Verón.
Uye zvakare, Gomez aive akachengetedzwa zvakanyanya mumakirabhu emuno, aive shasha yekuIndependiente (kwaaivawo nezvimwe zvidhori) uye aive nerakawanda rebasa rake rekuvaka pakirabhu yemuno kuverenga.
Mufananidzo usingawanzoitika wePapu Gomez akagara padyo nenzvimbo yaaive nebasa rake zhinji mumakwikwi enhabvu.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Kuverenga yaive diki Gomez kirabhu yevechidiki, chipfeko chaakatora nhanho dzake dzekutanga mumakwikwi enhabvu, kudzidza uye kugadzirisa matekinoroji aasina kumboziva kuti aizomutora kupfuura kondinendi yeSouth America mumakore mashoma chete. Panguva iyo Gomez aive akura 14 akabatana neArsenal de Sarandí uye akasimuka nemumakirabhu eArgentina kirabhu, achibatsira chikamu chevechidiki kukunda 2005 Copa Tandil zita asati aita rake rekutanga-timu muna 2006.
Akafananidzirwa kuruboshwe, akabatsira Arsenal kuhwina mukombe wa2005 Copa Tandil.
Gomez akapedza makore matanhatu ari mukirabhu negore rake rekuita zvirinani ari 6 paakapa zvibodzwa zvakabatsira timu yake kuhwina fainari yeCopa Sudamericana neClub America pakutonga zvibodzwa. Yakazotevera nhabvu yekuedza yakaona Gomez aine mwaka unoyevedza spell kuArgentine kirabhu San Lorenzo de Almagro, chiitiko chakatungamira divi reItari - Catania kuchengetedza masevhisi ake.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Ndichiri kuCatania, fomu yaGomez yakakwevera kufarira kubva kumakirabhu epamusoro-ndege kusanganisira Athletico Madrid, Fiorentina uye Inter Milan. Nekudaro, akasarudza kuridzira asingazivikanwe Metalist Kharviv weUkraine premier ligi. Zvikonzero zvekufamba kwakajairika kwaGomez kwakanangana nenyaya yekuti aive nechivimbo chekuvandudza padivi peUkraine nekuwana mukana wekuva chikamu chakakosha chekirabhu kupinda muChampions League iri kuuya.
Zvinosuruvarisa, izvo zvinotarisirwa kumberi hazvina kuzadzikiswa kuMetalist Kharkiv. Kutanga, UEFA yakasimudzira kurambidzwa kweMetalist kubva mukirabhu ichitsanangura kubatanidzwa kwekirabhu mumutambo we2008 sechikonzero chakasimba. Kuita kuti zvinhu zviwedzere, Gomez anga asingafare kuti kirabhu yakashaya hunhu uye kuoneka kwakabatana nemutauro wedziviriro izvo zvakamuita kuti anzwe akarasika. Hazvina kutora nguva refu asati ataura chinangwa chake chekubuda muchibvumirano chake nekutambira hafu yemubhadharo asi chikumbiro hachina kupihwa.
KuMetalist, murombo Papu akarwa nezvose kusanganisira kudzidziswa.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Gomez akaramba kudzokera kuMetalist mwaka unotevera achitsanangura mamiriro ekunze uye asina kugadzikana akazadza Ukraine, uyezve vatambi vekunze havana kudzoka nechikonzero chimwe chete. Hazvina kutora nguva refu Gomez isati yawanikwa neItaly Side Atlanta mumaawa ekupedzisira ewindo rekuchinjisa zhizha muItari.
Rusununguko pakupedzisira: Mufaro waPapu Gomez waisaziva muganho apo Atlanta yakamuwana kubva kuMetalist.
Iyo yekumberi yaive neyakajeka inonzwisisika dhizaini 2014/2025 mwaka neAtlanta uye ndokuenderera mberi nekuzvimisikidza seimwe yeayo anotungamira ekupa zvibodzwa uye vanopa vazhinji vanobatsira. Akatobata Atlanta kumutambo wechitatu-wekupera mumwaka we 2018-19 Serie A mwaka, chinzvimbo icho chakavawana nzvimbo mu 2019-20 UEFA Champions League, pamwe neye2019 Coppa Italia Final. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Achienderera mberi kuPapu Gomez rudo hupenyu, iye zvine ruremekedzo akaroora kumusikana wake akazova mudzimai Linda uye anga asina kumbobvira apinda mumakakatanwa vasati varoora kana kunze kwekuroora. Kana zvekare hakuna zvinyorwa zvevasikana vaPapu Gomez vasati vasangana naLinda.
Linda naGomez vari muhukama hwewanano hunonakidza.
Linda haangori mukadzi waPapu Gomez asi nhamba yake fan uyezve mukadzi webasa anoshanda seye dhizaini. Vaviri vekuroora vanokomborerwa nevana vatatu panguva yekunyora vanosanganisira Bautista (mwanakomana) Constantina (mwanasikana) uye milo.
Mufananidzo wakanaka wePapu Gomez Mhuri- Mukadzi wake nevana.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Mhuri pasina kupokana inoita kuti rake rehupenyu uye nerudo hupenyu huve hune mbiri. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi chakawanda pamusoro pemhuri yemhuri yaPapu Gomez kutanga nevabereki vake.
About Papu Gomez baba naamai: Kutanga nevabereki vaGomez, haataure zvakawanda pamusoro pababa naamai vake. Zvishoma zvatinoziva nezvevabereki vanotsigira zvinobva mukubvunzurudzwa umo Gomez akazivisa muchidimbu kuti baba vake vanoshanda nekirabhu yemuno Independiente. Akabvumawo amai vake anga ari mumwe wevakadzi vakakosha kubva paudiki hwake kusvika zvino.
Mufananidzo wemhemberero yaPapu Gomez nevabereki vake vaigara vachitsigira.
About Papu Gomez hama nehama: Papu Gomez ane hanzvadzi inozivikanwa saMonica uye haina chokwadi chekuti ane hama nehanzvadzi kunze kwaMonica. Iko hakuna mamwe marekodhi emhuri yemhuri yaPapu Gomez uye madzitateguru kunyanya vanasekuru nasekuru vake pamwe nasekuru nasekuru naambuya. Mumwe wababamunini vaGomez akaonekwa saHugo nepo babamunini vake, babamunini, babamunini pamwe nababamunini vasinganyanyo kuzivikanwa.
Mufananidzo usingawanzoitika wePapu Gomez nehanzvadzi yake Monica.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Iwe unoziva here kuti Papu Gomez haadi kuti ave panhau dzefomu yakanaka kudare rinotarisisa? Hunhu hwake hwekunze-hunhu - hunotsanangurwa zvakanyanya nechiratidzo cheAcarius Zodiac - chinogara chichiisa iye pachiedza.
Iye anotonhorera, akasarudzika, anotarisisa-kuita, akavimbika uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwakavanzika uye hwepamoyo. Zvinodiwa naGomez uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kuona mabhaisikopo, kushambira, kutamba mitambo yemavhidhiyo, kutamba tenesi, kubika uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Iye wenhabvu haafanire kutaura kuti akakura pakubika. Midziyo yacho inomutaurira.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Taura nezve mashandisiro anoita Papu Gomez uye kushandisa mari yake mari inofungidzirwa yemutambi iri kukura inopihwa mibairo uye mihoro yaanotambira yekutamba nhabvu yepamusoro-soro uye ongororo yemashandisiro ake mari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Uchapupu hwemararamiro akadaro hunosanganisira kugona kwake kukwira majee akasarudzika kuti aende kunzvimbo dzekuvakira dzakanaka. Pamusoro pezvo, munhu anorova ane mota dzinodhura dzakamiswa mumagaraji akanaka eimba yake nemafurati.
Uchapupu hwekugara kwakanaka: Heino Papu achimira padivi peimwe yemota dzake dzoumbozha.
Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Kuputira yedu Papu Gomez nyaya yehudiki uye Biography, isu tinopa zvishoma kana Untold chokwadi nezvenhau yebhola.
Kusvuta uye kunwa: Kunyangwe Gomez anga asati aonekwa achiputa, iye ari mukuru pakumwa uye akamboonekwa achinakidzwa nejegi rembwa nemukadzi wake Linda. Zvisineyi, zvine chokwadi chekuti anonamira mberi zvine mutoro kuchengetedza hutano nekudzivirira zviitiko zvekuseka kwevanhu.
Kunwa zvine mutsigo: Iye nemukadzi wake vanofarira kunakirwa majagi edoro.
Chitendero: Iko hakuna marekodhi ePapu Gomez ari kujekesa nezve chitendero chake. Nekudaro, izvo zvipingaidzo zviri mukumufarira iye kuva muKristu sezviri pachena muzita remwanakomana wake Bautista nemwanasikana Constantina. Izvi zvinoreva kuti vabereki vaPapu Gomez pamwe vakamurera semukristu.
Tattoos: Gomez anove pakati pevanoverengeka vakaberekerwa muArgentina nhabvu nyanzvi iyo yakakura pane tattoos. Anotungamirwa ane hunyanzvi hwemavara mumuviri paruoko rwake, pachipfuva, makumbo aine nzvimbo yakakwana yekuwedzera humwe hunyanzvi nemakore.
Mufananidzo unotonhorera unoratidza zvikamu zvematato aPapu Gomez.
Nezve rake zita: Unoziva here kuti zita remadunhurirwa raGomez "El Papu" rine chekuita nekudzikira kwake kwemamirimita mashanu nemashanu masendimita. Zita remadunhurirwa iro rinofungidzirwa kuti rakapihwa kumberi naamai vake rakatorwa kubva ku "Papuchi" zvinoreva kuti "mupfupi chimiro".
Armbands: Asides kuve mutambi wenhabvu Papu Gomez anozivikanwa nezve maitiro ake uye mavambo nekuda kwemukadzi wake uyo anomugadzirira akanaka kaputeni armbands kwaari. Iwo maarmbands anogona kubhadhara mutero kuvakuru venhabvu kana kurangarira zviitiko zvakakosha munhabvu pamwe nehupenyu hwemhuri yaGomez.
Mashoma maunganidzwa ezvimwe armbands zvakapfekwa neiye mukuru wenhabvu.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Papu Gomez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzike zvakanaka, ndapota chigovana nesu nesu kupindura pazasi. Tichagara tichikoshesa nekuremekedza mazano ako.
Atalanta BC Nhabvu Diary
Amad Diallo Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Zuva rakashandurwa: Gumiguru 7, 2020
Zuva rakashandurwa: Gumiguru 29, 2020